Nofeembar | 2013 | WEEJIDOW
Archive for Nofeembar, 2013
Dhegeyso: XILDHIBAAN Prof. Cabdirahman Xaaji Adan Ibbi oo ka hadley arimaha Gobolka Shabeelaha Hoose
Nofeembar 30, 2013
WAAJIDPRESS – 30 Nov 2013:
Prof Cabdirahmaan Xaaji Adan Ibbi oo ka mid xildhibaanada dowlada federalka somaliyaad ayaa waxaa uu ka hadley dhibta ka taagan gobolka shabeelaha hoose iyo doorka ey ku leeyihiin ciidamada dowlada wuxuuna ugu baaqey in dhamaantood ey ka wada shaqeeyaan nabada ciidamada dowlada ey ilaaliyaan sharafta dareeska ey xiran yihiin.
C/rahman ayaa sheegey in gobolka shabeelaha hoose mashaakilaadkiisa iska badan yahay loona baahan in la xaliyo.
Halkan hoose kaga dhegeyso Mobilkaada
Prof. Ibbi Mobil
War deg deg ah: Rag hubeysan oo Degmada Yaaqshiid ku dilay Garsoorihii Maxkamada ee Degmada Yaaqshiid
Wararka laga helaayo Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir, ayaa waxay sheegayaan in gelinkii dambe ee maanta lagu dilay Garsoorihii Maxkamada Degmada Yaaqshiid Sheekh Axmed.
Garsooraha, ayaa waxaa galabta la dilay xilli uu shaqada ka rawaaxay, kuna sii jeeday hoygiisa, ka gadaal markii ay wadada u galeen rag bistoolado ku hubeysnaa.
Ragga dilka geystay, ayaa cagaha wax ka deyay dilka kadib, waxaana u suurta gashay in ay ka nabadgalaan gacanta Ciidanka ammaanka ee ka hawlgala Degmada Yaaqshiid.
Saraakiisha Degmada Yaaqshiid, ayaa waxay xaqiijiyeen dilka Sheekh Axmed, ayna wadaan baaritaano ka dhan ah kuwii dilay Garsooaha.
Majirto cid sheegatay Masuuliyada dilka Garsoorihii Maxkamada ee Degmada Yaaqshiid, marka laga reebo in dilkiisa lala xiriirinaayo Islaamiyiinta ka soo horjeeda Dowladda.
23-kii bishaan, ayay ahayd markii Degmada Heliwaa ee Gobolka Banaadir lagu dilay Garsoorihii Maxkamada ee Degmada Heliwaa Xasan Nuur Maxamed, ka gadaal markii ay rasaas huwiyeen rag bistoolado ku hubeysnaa.
War cusub: DHAGEYSO: SIDA MAANTA BAARLAMAANKA UGA HADLEY MOSHINKA XUKUUMADA SAACID (OO KA SOO JEEDA BEESHA MAREEXAAN)
WAR HADDA SOO DHACAY: DHAGEYSO: BEESHA DIGIL & MIRIFLE OO BIXISEY DHAMAAN KHARASHKA KU BAXAY SHIRKA DOWLAD GOBOLEEDKA LIXDA GOBOL EE KOONFUR GALBEED SOOMAALIYA
Malaaq shiine oo aan wareysi la yeelaney maanta ayaa waxaa uu ka waramey guud ahaan halka uu marayo shirka ka socda magalada baydhaba ee la doonayo in maamulka loogu dhiso Lexda Gobol ee koonfurta somaliya.
Afhayeen Cali Shiine ayaan ka wareysanay halka uu marayo shirweynaha la rabo in dowlad goboleed loogu sameeyo lixda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Cali Shiine ayaa sheegay in shirka uu weli si rasmi ah u furmin lana sugayo wafuud caalami ah oo ugu horeeyo Danjiraha Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholos Kay iyo Xildhibaano.
Malaaq shiine mobil
War deg deg ah: Fadhigii BAARLAMAANKA OO hadda soo dhamaadey (Maxaa ka soo baxay)
Gudoomoyaha Baarlamaanka Federalka ee Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta dib u dhigay dooda mooshinka laga keenay Xukuumada Dr. Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid”.
Xildhibaano gaareysa 165 Xildhibaano, ayaa waxay maanta mooshin ka soo gudbisay Xukuumada, iyadoo kooromka Xildhibaanada soo xaadirtay ay yihiin 248 Xildhibaano.
Buuq iyo Is-Qabqabsi ayaa ka bilowday Xarunta Golaha Shacabka, ayadoo Xildhibaanadda Qaarkood ay sheegayaan in aysan Saxiixin Mooshinka oo laga been Abuurtay.
Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in maalinta bari ah baarlamaanka dood gelin doonan mooshinka kadibna ay isla bari codka kalsoonida u qaadi doonaan, iyaddoo uu ka dalbaday in ay iska soo dhex xulaan labada dhinac ee mucaaradka xukuumada iyo muxaafidka xukuumada ah.
Waxaa la iska dhex qabtay 81 xildhibaan kuwaasi oo bari labada dhinac u kala hadli doona oo midkasta dhankiisa uu difaaci doono hadafka uu taageersan yahay oo kala ah kalsooni kala noqosho iyo kalsoonisiin.
FAAHFAAHIN DHEERI AH: CIIDAMADA PUNTLAND OO DAGAAL KULA WAREEGEY XARUNTII MAAMULKA KHAATUMO EE TALEEX
Nofeembar 29, 2013
WAAJIDPRESS – 29 Nov 2013:
Ciidamo uu hogaaminayo Madaxweyne kuxigeenkii Puntland C/samad Cali Shire ayaa dagaal kula wareegay xaruntii MAAMULKA KHAATUMO STATE OO AH MAGAALADA TALEEX, kadib markii ay ka saareen Ciidamo taabacsanaa Madaxweynaha Khaatumo EE lagu magacaabo INDHASHEEL.
Xaalada degmada Taleex ayaa degan waxaana gacanta ku haya ciidamo daacad u ah Ahmed Karaash iyo Madaxweyne ku xigeenka Puntland C/samad C. Shire (OO labaduba ka soo jeeda beesha Dhulbahante).
Guud ahaan xaalada degmada Taleex ayaa degan saakay mana jirto, wax dagaal dambe ah oo magaalada maanta ka dhacay, inkastoo gawaarida dagaalka ay gaaf wareegayaan guud ahaan magaalada. Inta la og yahay waxaa dagaalada ku dhintay ilaa 10-ruux, halka tiro kale ku dhaawacmeen, waxaana u badan dad shacab ah.
Dadka deegaanka ayaa ka cabsi qaba in mar kale dagaalo dib uga soo cusboonaadaan, iyadoo labada dhinac ee dagaalamay ay xiisad u dhaxeyso.
Qaar ka mid ah Musharaxiinta u taagan xilka Madaxtinimada Puntland ayaa ku tilmaamay in dagaalkan laga lahaa dano siyaasadeed, lagana soo abaabulay Madaxtooyada Garowe.
War deg deg ah: Madaxweyne kuxigeenka Puntland oo dagaal rogaan celin ah ku qabsaday Magaalada Taleex
Wararka naga soo gaaraya Degmada Taleex ayaa sheegaya in Dagaal Galabta ka dhacay Gudaha Degmada taleex ay ku geeriyoodeen ilaa 9 Qof oo una Badnaa dhinaca Indha Sheel oo kamid ah Dhinacyada Dagaalka uu dhex maray.
Dhawac Badan ayaa la sheegay in uu sababay Dagaalkii Galabta iyadoo an la ogayn Tirada Rasmiga ah ee Dhaawaca, Waxaana Dagalka galabta uu dhaxeeyey tageerayaasha Khaatumo ee Indha Sheel iyo Ciidamo uu wato madaxweune ku xigeenka Puntland Cabdisamad Cali Shire .
Wararka waxay intaas ku darayan in Dagaalkii saakay ka dhacay Taleex isagana ay ka dhalatay Dhimasho 2 qof iyo dhaawac 4 Gaarayay sida ay xaqiijiyeen dad Goobjogayaal taleex ku sugan.
Makhribkii wax yar ka hor ayuu istaagay Dagaalkii Taleex oo Khasaaro dhimasho kii ugu badna dhaliyay Maanta, waxaana Deggan Hadda Xaaladda Taleex oo usan ka jirin wax dagaal ah kaddib saladdi Makhrib.
Dhanka kale Indha Sheel oo Kamid ah Madaxweynayaasha Khaatumo oo Saakay ay Ciidanka Madaxweyne kuxigeenka Puntland ka sareen Magaalada Taleex Dagaal Fududna uu dhexmaray ayaa Caawa ku sugan isaga iyo Tikniko Badan oo uu wato Deeganka Godaalo ee Hoos tagta Degmada Xudun.
War deg deg ah: Xukuumadda Somaliland oo dagaalka Puntland ku qabsatay Taleex kaga mashquulsan Mucaaradkeeda
Xukuumadda Somaliland ayaan illaa hadda wax talaabo ah ka qaadin dagaalka ay Puntland Maleeshiyadii Khaatumo kaga qabsatay Degmadda Taleex oo ka tirsan Gobolka Sool, iyadoo ay muuqato in Maamulka Puntland si rasmi ah ula Wareegey.
La-taliyaha Madaxweynaha Somaliland ee Goboladda Barri Fu’aad Aadan Cade oo ku sugan degmadda Xudun ayaa Madaxweyne Siilaanyo usoo jeediyey in uu wax ka qabto weerarka Puntland ku qabsatay Taleex isagoo sheegay Dadka lagu laayey ee Maleeshiyadda Khaatumo in ay yihiin Reer Somaliland waxa la qabsadayna uu yahay Dhul Somaliland.
Fu’aad Aadan Cade waxa uu Xukuumadda ku Eedeeyey in ay dayacday dhulka la qabsaday isla markaana ay ku mashquushay gudaheeda, isagoo ku Eedeeyey in ay dayacday goboladda darafyadda halka ay kaga mashquushay oo kali ah goboladda Dhexe.
Dhawaaqa La-taliyaha Madaxweynaha ee Arrimaha Barriga illaa hada xukuumaddu wax jawaab ah kamay bixin, waxaanay u muuqataa wali in ay Il-dheer ku eegayso isbedeladda degaamadaasi ka socoto oo wali taagan.
Dhinaca kale, hadalka Fu’aad ka sakow waxa jira dhaqdhaqaaq ay xukuumaddu wado oo ay kaga hor tagayso Axsaabta Mucaaradka ah oo Loolan adagi ku dhex marayo arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay Dood Qaran oo ay qaban qaabinayaan, waxaana socda tan iyo intii labada Guddoomiye Mucaarad dalka ku soo noqden kulamo lagu kala fur furayo iyaga iyo taageerayaashooda.
top news Maxuu Shariif Xasan Muqdisho ka wadaa oo laga qeyliyay. “Warbixin Culus
Xildhibaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa ka digay in kulanka Sabtida loogu codeynayo kalsoonida RW in ay jirto cabsi la xiriirta in xubno ka mid taageerayaasha Madaxweynaha ay codadka ku shubtaan.
Wuxuu xusay in ay jiraan xildhibaanno baarlamaanka ka tirsan oo ay horkacayaan Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Shariif Xassan & Caadil Sheegow oo ku taqasusay habka codadka looga shubto in ay ka shaqeynayaan arrintaas, wuxuuna ku baaqay in la helo goob-joogayaal caalami ah.
Xildhibaankan oo magaciisa qariyey wuxuu ka codsaday beesha caalamka, gaar ahaan dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya in ay goob-joogayaal u soo dirsadaan kulanka Sabtida.
“Dadka ololaha ku jira ee laga soo jiscimay Madaxtooyadda waxaa ka mid ah Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Shariif Xassan Shiikh Aadan & Caadil Sheegow Sagaar oo khabiir (Expert) ku ah sida codadka loogu shubto” ayuu yiri xildhibaanku, wuxuuna xusay in galaangalka xildhibaanadaasi ay dhici karta inuu saameyn ku yeesho shir-guddoonka, wuxuuna ka codsaneynaa beesha caalamka in ay dad u soo dirsato codeyntaasi.
“Haddii aan la helin observers waxey qorsheynayaan qolyaha mooshinka soo qoray in ay codadka xadaan” ayuu yiri xildhibaanku, isaga oo xusay in ay mooshinka laga soo abaabulay Madaxtooyada.
XOG.C/weli Gaas oo doonaayo in Xildhibaan Cali Khaliif uu xil ugu magacaawo Maamulka Puntland
Illo wareedyo ku dhow-dhow Xildhibaan Cali Khaliif Galeyr, ayaa shabakadda u xaqiijiyay in Xildhibaanka ay axdi meel wada dhigteen Ra’isul wasaarihii hore ee Somalia C/weli Gaas oo u taagan qabashada Xilka Madaxtinimo ee Maamulka Pntland.
C/weli Gaas, ayaa isagu doonaayo in Siyaasadda Puntland uu jaan-rogo waa haddii uu kusoo baxo Doorashadda Maamulka Puntland, waxa uuna axdi Cusub salkana ku haya Siyaasad la galay Xildhibaan Cali Khaliif, isagoona u ballan qaaday in Golaha Wasiiradda Maamulkaasi kusoo dari doono.
Musharax C/weli Gaas iyo Cali Khaliif Galeyr, ayaa iyagu isku fahansan Siyaasadda iminka ka taagan Somalia, waxaana jira Liis cusub oo uu wato C/weli Gaas, kaasi oo uu ku doonaayo in Shaqsiyaadka ku qoran u kala dhiibo xilalka Maamulkaasi, waxaana la sheegaya in inta badan Xilalka Maamulkaasi uu kusoo dari doono Beelaha Somalia, maadaama la sheegay in dhulka uu yahay dhul Soomaaliyeed.
Xildhibaan Cali Khaliif ayaa waxaa iminka lagu daray Liiska Mucaaradka Xukuumadda Somalia, waxa uuna iminka u taagan yahay qabashada Xilkaasi waa haddii uu doorashadaasi kusoo baxo C/weli Gaas, waxaana jiro warar hoose oo sheegaya in Cali Khaliif uu dhaqaale culus ugu deeqay Musharax C/weli Gaas.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Nofeembar, 2013.